Sida Kulammada Markhaatiyaasha Yehowah Loogu Diyaargaroobo
Sidee Baan Kulammada si Fiican ugu Diyaargaroobi Karnaa?
Haddii ad Bibleka la dhigatid Markhaatiyaasha Yehowah waa laga yaabaa inaad horey u eegtid casharka la dhiganayo. Caaqibo weyn bay leedahay haddaad sidoo kale kulammada ugu diyaargaroodid. Wax weyn baan ka dheefnaa markaan si joogta ah u qorsheysanno waxbarashadeenna.
Dooro waqtiga iyo meesha ad wax ku baran lahayd. Goormaad xoogsaari kartaa waxbarashadaada? Ma aroortii baa intaadan hawshaada bilaabin ama fiidkii markay carruurta jiiftaan? Xitaa haddii aadan waqti dheer awoodin goʼaanso inaad waqti goʼan waxbarashadaada siisid oo ha oggolaan in wax faraggelaan waqtigaas. Meel sharqan lahayn aad oo khashkhashaad oo dhan iska saar. Baqtii telefishenka, raadiyowga iyo telefoonka. Tukasho ku bilow waxbarashadaada siduu welwelka maalinta kaga baʼo oo Ilaahay Eraygiisa u baratid.—Filiboy 4: 6, 7.
Qoraalka la dhiganayo calaamee oo diyaar u noqo inaad qaybqaadatid. Ugu horrayn waxa laga hadlayo oo dhan dusha ka fiiri. Eeg cinwaanka qoraalka markaana ka feker siday cinwaannada qayb kasta ugu xiran yihiin qoraalka oo dhan. Fiiri sawirrada ku jira qoraalka iyo suʼaalaha ka dambeeya oo soo saara qodobada ugu muhimsan. Kaddibna akhri qayb walba oo raadi jawaabaha suʼaalaha. Akhri aayadaha la soo bandhigay oo ka feker siday waxa la dhiganayo u khuseeyaan. (Falimaha Rasuullada 17:11) Markaad aragtid jawaabta xarriiq kelmedaha ugu muhimsan sidaad u xusuusatid. Haddii ad rabtid kulanka dhexdiisa gacanta kor u taago oo si kooban u jawaab.
Markaad eegtid waxyaalaha kulan walba laga hadlo waxaad kordhin doontaa aqoontaada Kitaabka oo ah maaliyad oo kale.—Matayos 13:51, 52.
Qorshahee baad sameyn kartaa sidaad ugu diyaargarowdid kulammada?
Jawaab sidee baad u diyaarin kartaa?
Isticmaal habka kor lagu tilmaamay sidaad u diyaarisid mid ka mid ah casharrada kulanka. Kulanka dambe jawaabta ad rabtid inaad bixisid macallinkaaga Bibleka la diyaari.
Kulammadeenna Waa Sidee?
Wadaag Wadaag Sidee Baan Kulammada si Fiican ugu Diyaargaroobi Karnaa?